Order Picker Vagadziri & Vatengesi | China Yoraira Yekutora Fekitori
Raira kunhongachinhu chakakosha kwazvo mumidziyo yekuchengetera, uye inobata basa hombe muindasitiri yekugadzirisa zvinhu. Pano isu tinonyanya kukurudzira iyo yega inofambiswa odha picker. Nekuti ine zviyero zvakaenzana zvekutonga, otomatiki pothole dziviriro sisitimu, inotyaira pakukwirira kwakazara, isina-mucherechedzo tireyi, otomatiki brake system, emergency yekudzikisa system, emergency bhatani rekumira, humburumbira wakabata vharuvhu uye onboard diagnostic system uye zvichingodaro. zvishandiso mune yekuchengetera basa.
Self Propelled Order Picker yakagadziridzwa base pane semi magetsi odha picker, inogona kutyairwa papuratifomu iyo inoita kuti zvinhu zvekuchengetera zvishande zvakanyanya, hapana chikonzero chekudzora chikuva wozofambisa chinzvimbo chinoshanda
Semi yemagetsi odha mutauri anonyanya kushandisa mune yekuchengetera zvinhu mashandiro, mushandi anogona kuishandisa kunhonga zvinhu kana bhokisi nezvimwewo .. iri mune yakakwira shefu.
Kuburikidza nesimba rekugonesa bhatiri, rinogona kushanda zuva rese mushure meimwe nguva yakazara yakazara.Panguva imwecheteyo, pane bhuku rekutamisa mhando kurodha picker, chikuru chakasiyana pfungwa ndechekuti kana iwe uchiishandisa, iwe unofanirwa kuvhura gumbo rekutsigira pasi wobva watanga kusimudza kuti uite basa.